पुस्तक परिचय : सम्पदा जोगाउने अभियान | Kendrabindu Nepal Online News
पुस्तक परिचय : सम्पदा जोगाउने अभियान
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार १९:५८
नेपाल प्राकृतिक दृष्य र सुन्दरताले त धनी नै छ । मानव निर्मित साँस्कृतिक सम्पदामा पनि निकै नै अग्रस्थानमा छ । हामीले अहिले देख्ने गरेका मठमन्दिरहरु कहिले र कसले बनाए होलान् भनेर कमैलाई मात्र थाहा छ । कतिपयले यसको खोज र अध्ययन पनि गरेका छन् । गरिरहेका छन् अझैपनि । तर ती कति अपुरा होलान् , कति छुटेका होलान् । कतिपय ठाउँमा त यस्ता सम्पदाहरु मानव अतिक्रमित भएका छन् । जोगाउन पहल गर्नेहरु कम र अतिक्रमण गर्नेहरु धेरै भएका समाजमा सम्पदाहरुले आफ्नो अस्तित्व खोजीरहेका छन् ।
सम्पदाहरु हाम्रा इतिहास हुन् । हामी रानीपोखरीका कुरा गर्छौं, काष्ठ मण्डपका कुरा पनि गर्छौं । पशुपतिनाथ, स्वयम्भु, चाँगुनारायण, चारुमति जस जसका कुरा गर्छौं , ती सबैका आफ्नै महत्व छन् र तीनीहरुले इतिहास पनि बोकेका छन् । हामीले अहिले देखेका यी साँस्कृतिक सम्पदाहरु युगौंदेखि उभिएका छन् , जिउँदो तर बोल्न नसक्ने स्तम्भ बनेर । यी सम्पदा हेर्दै हाम्रा थुप्रै पुस्ताहरु बिलाइसके यहि धर्तीमा , यहि माटोमा । हाम्रा बा, हजुरबाले भन्दै आउनु भएका कथाहरु पनि यी सम्पदाहरुसँग जोडिएर आएका छन् । सबैजसो साँस्कृतिक धरोहरहरुका आफ्नै किवंदन्तीहरु पनि छन् ।
तर युगौंदेखि आफ्नो अस्तित्व बचाएर ठडिइरहेका यी सम्पदाहरुलाई बेला बेलामा आउने गरेका भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्तीहरुले सधैं समस्या बनाइरहे । वि.सं. १९९० सालको विनासकारी भूकम्प होस् वा ०४५ सालको नै किन नहोस् , अझै ०७२ सालको महाविनासकारी भूकम्पले ढालेका सम्पदाहरु त अझैपनि उठ्न बाँकी नै छन् । केहि उठेका छन् तर ती पनि आधुनिक शैलीमा मात्र । पुरानो अवस्थाका आकृति नाशिएका छन् । यी विविध कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । अस्तित्व हराउने अवस्थामा पुगेका यी सम्पदा जोगाउन धेरै लडाईंहरु पनि भएका छन् ।
हाम्रा साँस्कृतिक सम्पदाहरु जोगाउन कहाँ कस्ता समस्याहरु आए त ? अथवा अझै कहाँ के भइरहेका छन् , भन्ने विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका साहित्यकार एवं पत्रकार दामोदर न्यौपानेले यी सम्पदाहरु जोगाउने अभियान चलाएका छन् । उनको अभियान खोज र अनुसन्धानमा पनि केन्द्रीत छ । यसका साथै उनले त्यहाँ आएका समस्याहरु र हरेकजसो सम्पदाका महत्वहरुलाई दर्शाउँदै पुस्तकको रुपमा पनि उतारेका छन् । आगामी शनिबार (भदौ २१ गते) सो पुस्तकको सार्वजनिक गरिंदैछ । यो पुस्तक कसरी तयार गरियो, किन तयार गरियो लगायतका कुराहरु लेखककै शब्दमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :-
सम्पदाले भरिएको राजधानी सहर । सम्पदा, संस्कृति र सभ्यताको धनी ठाउँ । महानगरबाटै छिरेर ‘सम्पदा बिट’ मा कलम चलाउन थालेपछि क्षेत्र अझ विस्तार भयो । अनेकौं विषय छन् यसमा, लेख्न भ्याइ नभ्याइ भयो मलाई । अब मेरो मुख्य उद्देश्य नै ‘संरक्षणका लागि लेख्ने’ बन्यो ।
सम्पदा राष्ट्रको चिनारी हो । सम्पदा विगत अभिलेख हो, वर्तमानको यथार्थ हो र भविष्यको सन्मार्ग पनि हो । सम्पदा सभ्यताको सूचक हो । तत्कालीन मूल्य मान्यता र जीवन पद्धति देखाउने ऐना हो सम्पदा । समुन्नतिका प्रतीक हाम्रा सम्पदा राष्ट्रिय परिचयका संवाहक पनि हुन्, जसले विभिन्न कालखण्डका वैभव देखाउँछन् । विविध कालखण्डका अनेक व्याख्या गर्छन् । यस अर्थमा सम्पदा भावनात्मक एकता सिर्जना गर्ने जीवित इतिहास हुन् । यिनले सामूहिक आस्था, विश्वास र मूल्यमान्यताको निर्माण गर्छन् ।
विगतको समृद्धि देखाउने सम्पदा भविष्यको समृद्धिका आधार पनि हुन्— पुर्खाका देन हुन्, विगतका यथार्थ तस्बिर हुन्, समाजका अभिलेख हुन् । सम्पदा जीवित इतिहास हुन् । इतिहासले सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान दिन्छ, गौरव बोक्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा राष्ट्र चिनाउँछन् सम्पदाले तर उपेक्षित छन् हाम्रा सम्पदा । यिनको संरक्षण भए मात्र ‘सभ्यताको पहिचान’— “पुर्खाको नासो’— “समाजको गौरव’ भनेर गर्व गरिरहन पाइन्छ ।
सम्पदा जोगाए हाम्रो समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । समृद्धि पर्यटनको माध्यमबाट हुन सक्छ । सम्पदा जोगिए स्वदेशी/विदेशी पर्यटक आउँछन् । प्राकृतिक/सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक रहनसहन, वास्तुकला आदिका दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वसामु चिनिएको छ । यही विविधताले गर्दा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले नेपाललाई घुम्नै पर्ने मुलुकको सूचीमा समेत राख्ने गरेका छन् । सन् २०१५ मा बेलायतको ट्राभल्स म्यागजिनले समेत नेपाललाई घुम्नै पर्ने देशको सूचीमा राखेको थियो । त्यही वर्ष विश्वका पर्यटकले रूचाएको सहरको सूचीमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा परेको थियो ।
‘काठमाडौं सम्पदै सम्पदाले भरिएको सहर’ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय ‘युनेस्को’ ले पनि स्विकारेको छ । काठमाडौं उपत्यका सात सांस्कृतिक र उपत्यकाबाहिर एक सांस्कृतिक एवं दुई प्राकृतिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । त्यति मात्र होइन, युनेस्कोले म्याप अप वल्र्ड हेरिटेजमा राखेका नौ मध्ये एउटा फोटो भक्तपुर दरबार क्षेत्रको छ ।
यस्ता महत्वपूर्ण सम्पदा २०७२ सालको शक्तिशाली भुइँचालोले क्षतिग्रस्त बनायो । भुइँचालोले क्षति पु¥याउनु अघि पनि मानवीय गतिविधिकै कारण हाम्रा सम्पदा खतरामा पर्दै आएका थिए । युनेस्कोले कोही बेला खतराको सूचीमा राख्यो भने कोही बेला सूचीमा राख्ने चेतावनी दियो । विश्व सम्पदा सूचीमा राख्दा हाम्रा सम्पदाका जे गुण थिए, जे लक्षण देखिन्थे, त्यसमा बिस्तारै ह्रास आउँदै गयो भने युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्छ । खतराको सूचीमा राखेर र पनि केही समय सच्चिने समय दिन्छ । त्यो समयमा पनि प्रगति भएन भने सूचीबाटै हटाइदिन्छ— ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी ।’
भुइँचालोले क्षति पु¥याएपछि पुनःनिर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा लापरबाही भएका छन् । बलियो बनाउने नाममा तिनका मौलिकता मासिने गरी जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण भए । अन्धधुन्ध ठेक्कामा दिइयो । ‘ठेकेदारलाई नदिन’ युनेस्कोले चेतावनी दिइरह्यो तर पुरातत्व विभाग टेरेन । महानगर टेरेन । त्यही भएर हामीले खबरदारी गरिरहनुप¥यो ।
सम्पदा जोगाउन लेखेर खबरदारी गर्ने यात्रा मैले रानीपोखरीबाट तय गरेको थिएँ । रानीपोखरीमा पुरातात्विक मापदण्ड विपरीत काम हुँदै थिए । चुना, सुर्की जस्ता परम्परागत सामग्री प्रयोगै भएनन्, आधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण प्रारम्भ भएको थियो । संरक्षणको सिद्धान्त अनुसार नभएकैले मैले खबरदारी लेखन गर्नुप¥यो ।
भौतिक सम्पदामा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सौन्दर्य झल्कन्छन् । यिनमा तत्कालीन ज्ञान, सिप र अनुभव आदि समाहित भएका हुन्छन् । त्यही भएर ‘पुराना मौलिकता जोगाउनुपर्छ’ भनेर विश्वभर पहल भएका छन् । संरक्षणका अनेक सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । सम्पदालाई विश्वसनीय, भरपर्दो बनाउन र संरक्षण कार्यलाई एकरुपता दिन विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्र जारी भएका छन् । तिनीहरुले सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न ऐन कानुन, सिद्धान्त र एकरुपताका नियम निर्धारण गरेका छन् । ती अधिकारपत्रलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन युनेस्को, विश्व सम्पदा केन्द्र, इकोमस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था क्रियाशील छन् । तिनीहरु विभिन्न समयमा पारित संरक्षणका दर्शन र सिद्धान्त आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
तत्कालीन वास्तुकला अध्ययनका विविध विषय मात्र होइनन् सम्पदा, देश र जनइतिहासका सक्कली प्रमाण हुन् । राष्ट्रियताका प्रतीक हुन् । यस्ता सम्पदाको स्थायित्वका लागि गरिन्छ जीर्णोद्धार । तर हाम्रा प्रयास कस्ता छन् ? स्थायित्व दिने खालकै छन् ? अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने छैनन् । मौलिकता र पहिचान मासिने गरी भएका छन् जीर्णोद्धार । अघिल्ला पुस्ताले गरेका कामलाई चिरस्थायी गर्ने प्रक्रिया हो जीर्णोद्धार । चिरस्थायी भनेको जस्तो थियो त्यस्तै राख्ने । सिप, प्रविधि र निर्माण सामग्री जस्तो थियो, त्यस्तै हस्तान्तरण गर्नु हो संरक्षण । तर, यहाँ लुकीलुकी आधुनिक निर्माण सामग्री मिसाइयो । छलीछली सम्पदाका मूल्य मान्यता विपरीत गइयो । त्यही भएर हामी लड्नु परेको हो ।
के हो जीर्णोद्धारको मूल्य ?
सम्पदामा ऐतिहासिकता हुन्छन्, पुरातात्विकता र प्राचीनता हुन्छन् । सौन्दर्यपूर्ण र साङ्केतिक हुन्छन् । वास्तुकलाका वैज्ञानिक र प्राविधिक मूल्य हुन्छन् । तिनैलाई सम्पदाको सांस्कृतिक मूल्य भनिन्छ । सम्पदाको अर्को मूल्य हो संवेदनशीलता । त्यसमा निहित परिचय, आश्चर्य, निरन्तरता, अलौकिकता र साङ्केतिकता आदि मूल्य मान्यताका संवेदनशीलता हुन् । तेस्रो मूल्य हो दार्शनिकता । तार्किक, परम्परागत चिन्तन, धार्मिक संवेदनशीलता, वेष्टित धार्मिक व्यापकता जस्ता पक्ष दार्शनिक मूल्य हुन् ।
प्रयोग मूल्य सम्पदाको चौथो मूल्य हो । यसमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जस्ता पक्ष हुन्छन् । जीर्णोद्धार भनेकै सम्पदाभित्र लुकेका मूल्य एवं मान्यताहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हो । हामीले ती मूल्य मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ ।
समय परिवर्तनशील छ । कुनै पनि सम्पदाको मूल्य मान्यतामा पनि समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जान सक्छ । यसरी परिवर्तन हुँदा तिनका मूल्य मान्यतामा आँच आउन पनि सक्छन् । त्यो अवस्थाप्रति भने सधैं सजग हुनुपर्छ ।
जीर्णोद्धारको सिद्धान्त र प्रक्रिया होसियारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्दा कतै कतै मूल्य मान्यतामा हस्तक्षेप पनि हुन सक्छन् । हस्तक्षेप गर्दा न्यूनतम मात्रै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । प्रत्येक जीर्णोद्धार प्रक्रियाले सम्पदाको महत्वलाई सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ ।
जीर्णोद्धार गर्ने छुट्टै प्रक्रिया हुन्छन् । ती प्रक्रिया पूरा गर्न जीर्णोद्धार कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला लगत सङ्कलन गर्नुपर्छ । सम्पदाको अवस्थिति, भौगोलिक क्षेत्र, प्रयोग सामग्री, प्राचीनता, जीर्णोद्धारको इतिहास, क्षय हुने कारण जस्ता विवरण समेटेर प्रारम्भिक लगत तयार पार्नुपर्छ ।
पहिलाको लगत अनुसार छ कि छैन ? जीर्णोद्धार गरेपछि यसलाई परीक्षण गरिन्छ ।
दोस्रो कार्यविधि हो प्रारम्भिक निरीक्षण । जीर्णोद्धार गरिने भाग वा सम्पदाको सम्पूर्ण भौतिक अवस्था, आवश्यक पर्ने सामग्रीको पूर्ण विवरण, क्षति पुगेका र पुग्न सक्ने सामग्रीको भौतिक अवस्था अध्ययन गरिन्छ । अनि मात्र संरक्षण वा जीर्णोद्धारको योजना बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो कार्यविधि हो अभिलेख । अभिलेखले जीर्णोद्धारलाई सहज बनाउँछ । अभिलेख तयार गर्दा ड्रइङ, फोटोग्राफी तयार गर्नुपर्छ ।
चौथो कार्यविधि हो जीर्णोद्धार प्रक्रियामा अपनाउनु पर्ने सतर्कता । सुरक्षा व्यवस्था, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जीर्णोद्धारका क्रममा हुने क्षतिको मानवीय वा संरचनागत मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन, मौसम सम्बन्धी अध्ययन र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा गनुपर्ने कलात्मक एवं पुरातात्विक महत्वका सामग्रीको भण्डारण जस्ता कार्यविधि समावेश हुुनुपर्छ ।
यिनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया, कार्यविधि र मूल्य मान्यता अनुसार हाम्रा सम्पदा जीर्णोद्धार भए कि भएनन् ? यही ‘वाचडग’ को काम गर्नु थियो मलाई । सो क्रममा सम्पदा सम्बन्धी थुप्रै अनुसन्धान गर्ने मौका मिल्यो । त्यही मौकाको सदुपयोगबाट तयार भयो यो पुस्तक ।
(न्यौपानेको सातौं पुस्तक सम्पदा लडाईं यही भदौ २१ गते शनिवार वसन्तपुरको शिवपार्वती डबलीमा सार्वजनिककरण हुदैछ ।)
अभियान, पुस्तक परिचय :, सम्पदा जोगाउने
Prevविवाहको तयारी हुँदै थियो, मध्यरातमा भयो बाबुछोराको हत्या
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा भोली सार्वजनिक विदाNext
कोरोना रोकथामका लागि होण्डाले ‘जिम्मेवार नेपाली म’ अभियान सञ्चालन गर्दै
राजधानीबाट सुरु भयो एक घर एक रक्तदाता अभियान
प्रदेश नं १ मा सस्तोमा खाना खुवाउनेको लहर : इनरुवामा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान सुरु